Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan kamid ah fadhiyadooda caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana shir Guddoomiyay Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Aqalka Sare Abshir Bukhaari.
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda ku saabsanaa laba Ajendo oo kala ah Dhageysiga Warbiixnta Guddiga dib u Eegista Dastuurka Kumeel gaarka ah ee Soomaaliya iyo ka doodista Sharciga Xaqsiinta Siyaasiinta oo hore labadooda uga soo gudbay Golaha Shacabka.
Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa dib u celiyay Xeerka Xaqsiinta Siyaasiinta iyagoo dalbaday in wax laga soo badalo kadib markii ay sheegeyn in ay ku arkeen waxyaabo badan oo caqabado ku ah Siyaasiinta iyo dadka kale ee uu quseeyo Xeerkaan.
Dhinaca Xubnaha Aqalka Sare ayaa Warbixin ka dhageestay Guddiga dib u Eegista Dastuurka Soomaaliya, waxaana Warbixinta ka hor Akhriyay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Warbixinta Guddiga dib u Eegista Dastuurka ayaa saddexdii bilood-ba mar laga dhageestaa Guddiga iyagoo soo bandhiga waxyaabihii u qabsoomay iyo Caqabadaha ku horgudban.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Aqalka Sare Senator Abshir Bukhaari ayaa Guddiga ka dalbaday in Soomaaliland laga qaybgaliyo dib u Eegista Dastuurka Soomaaliya maadaama ay muhiim u tahay howlaha socda ee dhameestirka Dastuurka Soomaaliya.
“Soomaaliland waa muhiim in laga qaybgeliyo dib u Eegista kumeel gaarka ee Soomaaliya, waxaana Guddigiinna iyo Wasaaradda looga baahanyahay in ay dadaal sameeyaan” ayuu yiri Senator Abshir Bukhaari Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Xubnaha Aqalka Sare.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo saacad dheeraad ah ku daray xiliga uu furmaayo Kulanka Golaha Shacabka
Xaliimo Yareey" wax muddo korarsi ah oo ay damacsanyihiin madaxda Qaranka ma ogi"